Infografika: Tsara ho an'ny fifamoivoizana sy ny SEO
Nisy vetivety ny infografika fa lasa ny hatezerana rehetra tato ho ato. Miaraka amin'ireo tranonkala toa an'i Digg efa ho faty, ireo mpivarotra izay te-handehandeha be dia be amin'ny tranokalany dia mampiditra sary mampahafantatra izay mitantara tantara lehibe iray. Mandritra roa arivo dolara dia azonao atao ny manakarama orinasa infografika hamoronana fampahalalana fampahalalana avo lenta izay manazava ny olana iray. Ny orinasa Infographic no hanao ny fikarohana ary ny endrika. Misy orinasa Infographic aza misy famandrihana mitohy.
Infographic momba ny lohahevitra avy amin'ny Magnetisma an'ny mpanjifa:
Misy orinasa mpamorona infografika vitsivitsy any, ao anatin'izany DK New Media, izay manome an'ity serivisy ity. Ny fivezivezena virtoaly ateraky ny infographic tsara dia antsasaky ny tantara ihany. Satria maro ny olona mametraka sy miresaka momba ilay infographic ao amin'ny bilaogin'izy ireo sy amin'ny media sosialy, paikady miavaka io amin'ny famoahana ireo rohy mankany amin'ny orinasanao.
Tags: maherin'ny mpanjifaSary torohaysandan'ny infographicinona no atao hoe infographic
22 Aogositra 2012 amin'ny 6:49 PM
Mitombo isan'andro ny fifandraisan'ny infografika amin'ny media sosialy. Ny masoivohon'ny marketing amin'ny Internet nofidiako dia nampiseho nomerao marina momba ny fahombiazan'ireto zavatra ireto. Lahatsoratra tsara!